Ungakuqopha Kanjani Ukudluliswa ku-Twitter? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Umsebenzisi we-Twitter unethuba lokurekhoda i- Ukusakaza bukhoma nge-Hardware noma i-Software; Ngalesi sizathu, kufanele ulandele le nqubo: Okokuqala, iya ekucushweni kohlelo lwakho lokusebenza noma i-Hardware.
Kanye kusicelo sabo, Umsebenzisi uyaqhubeka nenqubo: Khetha Transmission Server ngezifiso; khetha i-Twitter kusuka kunketho eyehlayo ukuze uqinisekise ukuthi isifaki khodi nge-Akhawunti yakho ye-Twitter.
Ngena ku-akhawunti yakho ye-Twitter nge Igama lomsebenzisi ne-password ye-Akhawunti ofuna ukuthumela kuyo iTransmission bese wamukela izimvume. Okulandelayo, iqala ukudlulisa ividiyo kwinethiwekhi yokuxhumana nabantu iTwitter.
Yabelana ngokusakaza bukhoma noma ukudlala kabusha ku-Twitter
para Yabelana ngokusakaza Phila noma udlale kabusha ku-Twitter, Umsebenzisi kufanele alandele imihlahlandlela nezinqubo ezitholakala enkundleni ye-Twitter ukwenza isenzo esishiwoyo; Ngale ndlela, kufanele:
Chofoza kusithonjana sokwabelana esisendaweni ye- isikrini esigcwele Bukhoma ividiyo noma uphinde udlale; bese ukhetha eyodwa yalezi zinketho: Chofoza ku-Live Share (uma kuyi-Live).
O Yabelana kwasekuqaleni (lapho usebenzisa imodi yokuPhinda); chofoza ku Yabelana kusuka ukuze uthumele i-Tweet, thumela ngomyalezo oqondile noma ukopishe isixhumanisi sevidiyo ebukhoma noma ukudlala kabusha kusuka kumzuzu uMsebenzisi awukhethayo ngebha yokukhetha.
VIMBELA UMUNTU EKUBUKENI NOKUPHAWULA KWI-VIDEO YAMI EBukhoma KU-TWITTER
Umsebenzisi unethuba lokuvimbela umuntu kusuka Bona futhi ubeke amazwana ngevidiyo yakho Bukhoma ku-Twitter; enye yezindlela ukuvimba lowo muntu ukuthi angenzi lutho ngevidiyo yakho ebukhoma.
Ukuvimba umuntu, uMsebenzisi kumele: Chofoza Ukuphawula kwakho, khetha Iphrofayili yakho, chofoza ku-Gear, ukhethe Vimba umsebenzisi. I-Akhawunti yalowo omunye umuntu ngeke isakwazi ukusebenzisana namavidiyo akho abukhoma futhi izovinjelwa ku-Twitter.
Umsebenzisi njengesibukeli angakwazi bika ukuphawula ocabanga ukuthi kuyacasula futhi kuyahlukumeza. Ukuze wenze lokhu, khetha ukuphawula bese uchofoza ku-Bika ukuphawula. Ngalesi senzo, ngeke usakwazi ukubuka imilayezo yomunye umuntu esele ye-Live Stream.
Okuqukethwe akuvunyelwe kumavidiyo abukhoma
Imithetho nezinqubomgomo ze-Twitter kusungula okuqukethwe akuvunyelwe kumavidiyo abukhoma, njengama: Amavidiyo aqukethe udlame olubonakalayo, okuqukethwe kwabantu abadala noma izithombe ezinenzondo ezephula ukuthula nenhlalakahle yabasebenzisi kanye nomphakathi.
Noma iyiphi ividiyo ebukhoma eshicilelwa ngenhloso ye- gqugquzela ubutha phakathi kwabantu ngenxa yohlanga, inkolo, ukukhubazeka, ubulili, imvelaphi yobuzwe, ubuzwe, njll.
I-Twitter inayo zero tolerances ngamavidiyo abukhoma noma okunye ukushicilelwa okwethula okuqukethwe nezithombe ezibandakanya ukuhlukunyezwa kwanoma yiluphi uhlobo lwezingane, intsha kanye nabantu abasha; nangezilwane ezihlukumezekile, ezicwiyiwe.
1 Yabelana ngokusakaza bukhoma noma ukudlala kabusha ku-Twitter
2 VIMBELA UMUNTU EKUBUKENI NOKUPHAWULA KWI-VIDEO YAMI EBukhoma KU-TWITTER
3 Okuqukethwe akuvunyelwe kumavidiyo abukhoma
Ungayenza kanjani ingasebenzi i-akhawunti yami kuwebhu ye-twitter?